Kooxda Manchester City oo kulamo yar ugu diyaar-garoobaysa xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20 – Gool FM
(Manchester) 10 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa bilaabaysa u diyaar-garowga xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League 2019/20.
Kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa socdaal kala duwan bixin doonta iyadoo meelo ka baxsan England ku soo ciyaari doonta kulamo saaxiibtinnimo sida Shiinaha iyo Japan.
Manchester City ayaa socdaalkeeda ugu horreeya waxa ay ku aadi doontaa dalka Shiinaha, waxaana ulanka ugu horreeya ay halkaas 17-ka bishaan July kula ciyaari doontaa kooxda reer England ee West Ham United.
Kooxda ka dhisan Magaalada Manchester ee Man City ayaa intaas kaddib waxa ay kulankeeda labaad Magaalada Shanghai ee isla dalkaasi Shiinaha kula dheeli doontaa 20 bishan July kooxaha Newcastle ama Wolves tii soo adkaata maadaama tartanku uu koob yahay.
Sky Blue kooxda lagu naanayso ayaa kulankeeda ugu dambeeya ee isu-diyaarinta xilli ciyaareedka cusub waxa ay ku soo gabagabayn doontaa kulan ay dalka Japan kula dheeli doonto 27 bishaan July kooxda Yokohama FM.
Intaas kaddib kooxda hanatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore 2018-19 ayaa isu diyaarin doonta kulanka FA Community Shield oo ay 4 bisha Agoosto ee soo aaddan la ciyaari doonaan kooxda Liverpool.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kulamada saaxiibtinnimo ee ay kooxda Manchester City ciyaari doonto kuwaasoo ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub 2019-20 iyo taariikhda la ciyaari doono:-
July 17: West Ham – Olympic Sports Center, Nanjing, China
July 20: Newcastle/Wolves – Hongkou Stadium, Shanghai, China